दाङ,दाङमा भएको मोटरसाइकल दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ निवासी २५ वर्षीय मनोज विक र घोराही ५ धर्ना निवासी वर्ष २५ कै दिपक विकको मोटरसाईकल दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ ।गएराति ११ बजेतिर घोराहीबाट तुलसीपुरतर्फ आउँदै गरेको रा ४ प ७४९३ नम्वरको मोटरसाइकल सिमेन्टको पिलरमा ठोक्किदा उक्त दुर्घटना भएको थियो । उनीहरु दुबै जनाको उपचारका क्रममा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा राति १२ बजेतिर मृत्यु भएको हो। प्रहरीका अनुसार मोटरसाइकलमा सवार दुबैले मादकपदार्थ सेवन गरेका थिए।
४ आश्विन २०७६, शनिबार ०९:१५
दाङमा भएको मोटरसाइकल दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ निवासी २५ वर्षीय मनोज विक र घोराही ५ धर्ना निवासी वर्ष २५ कै दिपक विकको मोटरसाईकल दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ ।
गएराति ११ बजेतिर घोराहीबाट तुलसीपुरतर्फ आउँदै गरेको रा ४ प ७४९३ नम्वरको मोटरसाइकल सिमेन्टको पिलरमा ठोक्किदा उक्त दुर्घटना भएको थियो । उनीहरु दुबै जनाको उपचारका क्रममा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा राति १२ बजेतिर मृत्यु भएको हो। प्रहरीका अनुसार मोटरसाइकलमा सवार दुबैले मादकपदार्थ सेवन गरेका थिए।
दुई जनाको मृत्यु, मोटरसाइकल दुर्घटनामा
Prevकथा : बर्बादीको बस्ती
गोरखा केन्द्रबिन्दु भएर बिहानै भूकम्पको धक्काNext
गुल्मीमा ट्रकको ठक्करबाट दुई जनाको मृत्यु
टिपर भिरबाट खस्यो, दुई जनाको मृत्यु
रुपन्देही र चितवनमा कोरोनाबाट दुई जनाको मृत्यु
गण्डकी प्रदेशमा ३१ नयाँ सङक्रमित थपिए, दुई जनाको मृत्यु